Sat, Jul 11, 2020 at 12:40pm
बालुवाटारमा विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक जारी, देउवा पनि सहभागी #आहा खबर# अबदेखि सातै प्रदेशमा ५ हजार ५ सय तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न पाइने #आहा खबर# सुदूरपश्चिममा काेराेना संक्रमितको संख्या ३ हजार ७ सय ५५ पुग्यो #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट केएमसी अस्पतालमा एक जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# अमेरिकामा एकैदिन थपिए ७१ हजार कोरोना संक्रमित #आहा खबर# पशुपतिको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ #आहा खबर# पहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १ लाख र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार #आहा खबर# बढ्यो अमेरिकी डलर, युएइ दिराम र मलेसियन रिँगिटको भाउ #आहा खबर# आज शनिबार पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था खुल्ने #आहा खबर# अन्तत: तत्काल सञ्‍चालन नहुने सार्वजनिक यातायात #आहा खबर# सलह किन्न छुट्याइयाे पाँच लाख बजेट #आहा खबर# म्याग्दी पहिरो अपडेट: प्रभावित ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट सुरक्षाकर्मी लगिँदै #आहा खबर# लकडाउन खुकुलो पारेपछि कोरोनाको जोखिम राजधानीतर्फ बढिरहेको छः प्रधानमन्त्री (सम्बोधनको पूर्णपाठ) #आहा खबर# 'आन्तरिक समस्यामा अल्झिए पनि सरकारको सारा ध्यान जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित छ' #आहा खबर# मुलुकभर २९ विपद्जन्य घटनाः १२ को मृत्यु, ३२ सम्पर्कविहीन #आहा खबर#
काठमाडौँ, ६ असोज पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन–२०७६) आजदेखि जारी भएको छ । आज प्रेस काउन्सिल नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन–२०७६) जारी भएको घोषणा गर्नुभएको हो । सञ्चार क्षेत्रको नयाँ परिवेशअनुरुप आचारसंहितालाई समसामयिक बनाइ समग्र मिडिया क्षेत्रलाई मर्यादित, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने..
बुटवल, ६ असोज प्रदेश नं ५ सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो प्रदेश परिषद्को बैठकमा भाग लिन आउनुभएका रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले कर्मचारी अभावले गाउँपालिकाको नियमित प्रशासनिक काममा समस्या भोग्नु परेको गुनासो ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पालिकामा लेखामा काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा अन्य पालिकाका कर्मचारीबाट काम चलाउनु परेको बताउनुभयो । कर्मचारी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले तत्कालै काम अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको..
काठमाडौँ, ६ असोज । लगानी बोर्डको आजको ४०औँ बैठकले काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ परियोजनाको जिम्मेवारी ‘चिनियाँ कम्युनिकेसन पूर्वाधार कम्पनी’लाई दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले प्रस्ताव पेश गरी सङ्क्षिप्त सूचीकरण (सर्ट लिष्ट)मा परेकामध्ये मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारमा उक्त कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परियोजना विकास गर्न ‘जुरिच..
काठमाडौं, ६ असाेज । निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । दसैँ, तिहार तथा छठका अवसरमा कम्पनीले ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा उक्त छुटको घोषणा गरेको हो । घटस्थापनादेखि लागू हुनेगरी ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने छुट इन्धन र करबाहेकको भएको कम्पनीका संस्थागत प्रबन्धक अनिल मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।..
काठमाडाैं, ६ असोज नैनसिंह महरद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेकपा सरकारका काण्डैकाण्ड’ को सोमबार काठमाडौंमा विमोचन गर्दै सभापति देउवाले ओली सरकारले शून्य सहनशीलताको कुरा गरेर मुलुकलाई भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डमा डुबाएको दावी गरेका छन् । उनले प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यतामाथि सरकारले आक्रमण गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै त्यस्ता क्रियाकलाप अब सैह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले विना प्रतिस्पर्धा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठेक्कामा दिएर सरकारले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको..
काठमाडौँ, ६ असोज । मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालको एउटा व्यग्र प्रतीक्षाको विषय हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने चर्चा नेपाली सञ्चारमा छाएको पनि धेरै वर्ष भयो । सञ्चारमाध्यममा मात्र नभएर नेपालीमाझ पनि यो चासोले बढी नै चर्चा पाउने गरेको छ । निकै लामो प्रतीक्षापछि अब भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने निश्चितजस्तो भएको पछिल्ला बहस र चर्चाहरुले..
काठमाडौँ, ६ असोज । यस वर्ष मनसुन बाहिरिन अझै एक साता लाग्ने भएको छ । मनसुनको औसत समय आज अर्थात् सेप्टेम्बर २३ भए पनि अझै सक्रिय हुने क्रम बढिरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले जनाएको छ । मनसुन सकिने बेलामा पश्चिम तिरबाट पूर्वतिर वायु सर्नुपर्छ तर अहिले त्यस्तो भएको छैन । हाल वायु पश्चिमतिर नै सक्रिय भइरहेको छ ।..
हामीलाई अर्को आन्दोलन, अभियान र मिसन चाहिएको छ : प्रचण्ड
काठमाडौं, असोज ६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिले फेरि एउटा अर्को आन्दोलन चाहिएको बताएका छन् । दिवंगत नेतृ सहाना प्रधानको स्मृतिमा सोमबार राजधानीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले त्यस्तो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र प्रतिष्पर्धात्मक हुने बताएका हुन् । ‘हामी हिजो जे आदर्श भन्थ्यौं, आज त्यही आदर्शमा छौं त ? हामी सबैले गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न यही हो,’ प्रचण्डले भने,‘हामीलाई..
काठमाडौँ, ६ असोज । लत्ताकपडा, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पछिल्ला २ वर्षका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारको विशेष टोलीले नेपाल प्रहरी मुख्यालयस्थित प्रशासन विभागअन्तर्गतका आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोसाक, सवारी साधनलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सक्कली कागजात लगेको हो । प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर खरिदका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन..
सडक–सदन दुवैतिर कांग्रेस कमजोर
काठमाडौँ, ६ असोज । कांग्रेस केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा सरकार बाहिर छ । स्थानीय सरकारमा पनि उसको उपस्थिति कमजोर छ । प्रदेश २ को सरकारमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतसमेत पाएको छैन । संसद् प्रतिपक्षको हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ तर संघ र प्रदेशका संसद्मा हुने गतिविधिले त्यसो भन्दैनन् । परम्परागत शक्तिशाली पार्टीको उपस्थिति संसद्मा प्रभावी छैन । त्यसैको झोक फेर्न हुन सक्छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर..
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विचारधारा लागू गर्ने तयारीमा सत्तारुढ नेकपा
काठमाडौँ, ६ असोज । सत्तारुढ नेकपाले मुलुकको विकासका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको विचारधारा लागू गर्ने तयारी थालेको छ । नेकपाले चीनमा चामत्कारिक विकास गर्न सफल सीको विचाराधाराबारे पार्टीमा प्रशिक्षण दिँदै सीको विकास मोडल लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो । नेकपाले अवलम्बन गरेको जनताको जनवाद (जज) र जिनपिङको विचारधाराबारे केन्द्रित भई आज(सोमबार)देखि प्रशिक्षण सुरु हुन लागेको नेकपाले जनाएको छ । चिनियाँ..
काठमाडौँ, ६ असोज । नेपाल प्रहरीले उपत्यकाभित्र हुने आपराधिक गतिविधिको निगरानी गर्न सिसी क्यामेरा जडानको कामलाई तीव्रता दिएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रहरीको सक्रियतामा ११ सयभन्दा बढी क्यामेरा उपत्यकामा थप जडान गरिएको छ। अब उपत्यकाभित्र जडान भएका सिसी क्यामेराको संख्या १६ सय पुगेको छ। प्रहरीले जनशक्तिसँगै उपत्यकाभित्र हुने गतिविधिको निगरानी गर्न सिसी क्यामेराको संख्या थप गरेको हो। समुदाय–साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाएसँगै उपत्यकामा..
दसैंका लागि खोलिएको टिकट बुकिङ भद्रगोल
काठमाडौँ, ६ असोज । दसैंका लागि आइतबारदेखि खोलिएको टिकट बुकिङ भद्रगोल देखिएको छ। टिकट बुकिङमा उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा मध्यरातदेखि लाइनमा बसेका यात्रुले आइतबार अबेरसम्म टिकट पाउन सकेनन्। बुकिङका लागि यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात व्यवस्था विभागले समन्वय गरेका थिए। कर्णाली तथा अन्य दुर्गम भेगका बस सुनिश्चितता नहुँदा आइतबार टिकट बुकिङ हुन सकेन। गोंगबु, कोटेश्वर, गौशाला, बल्खुलगायत टिकट काउन्टरमा मध्यरातदेखि लाइन बसेका..
चीनमा के पढ्दैछन् नेकपाका मेयरहरू ?
काठमाडौँ, ६ असोज । नेकपाका २९ मेयर केही दिनयता चीनको कुनमिङमा कक्षा लिइरहेका छन्। पढाइका विषय छन्– चीनको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पर्यटन, औद्योगीकरण, सहरीकरणलगायत। साथमा चीन सरकारले राज्य सञ्चालनमा अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रियासमेत सिकिरहेका छन्। ‘सेमिनार अफ मेयरर्स फ्रम नेपाल’ नाम दिइएको प्रशिक्षणमा तीमध्ये तीनजना गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन्। युनान प्रान्तको कुनमिङस्थित ‘युनान युनिभर्सिटी अफ फाइनान्स एन्ड इकोनोमिक्स’ मा चिनियाँ विशेषज्ञ..
काठमाडौँ, ६ असोज । उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि २२ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सो निवेदन दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभा एक, प्रदेशसभा तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक र ३६ जिल्लाका ४१ वडाध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनले दल दर्ता हुनलागेको हो। भदौ १६ गतेदेखि मसान्तसम्ममा २२ वटा दलले..
यस्ता रोग लागेका व्यक्तिले खानु हुँदैन करेला !
काठमाडौँ, असोज ५ करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो । तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुदैन । गर्भवती हुनुहुन्छ ? करेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । बढी करेलाको सेवनले गर्भ तुहिनेसमेत डर हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो आवस्थामा करेला खाँदा ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ । फर्टिलिटी समस्या भएमा यदि..
काठमाडौँ, ५ असोज ‘कहाँ जाने ? त्यहीँ, जहाँ जान आवश्यक छ जहाँ अपमान होइन सम्मान हुन्छ जहाँ पीडा बिसाउन सकिन्छ जहाँ मन शान्त हुन्छ जहाँ खुशी साटासाट गर्न सकिन्छ जहाँ जानु प्रिय हुन्छ...।’ विमानस्थलमा संसदीय समितिको कार्यक्रम नसकिँदै हिँड्न खोज्दा सोधियो, ‘कहाँ जाने ?’ । विमानस्थल जानुभन्दा पनि अघिल्लो कार्यक्रमलाई पनि छोट्याएर हिँड्न लाग्दा त्यही सोधिएको थियो, ‘कहाँ जाने ?’ ‘कहाँ जाने ? कहाँ जाने ?’ लगातारका प्रश्नले सत्तारूढ..
काठमाडौँ, ५ असोज गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दशैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वमा सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । आज गृह मन्त्रालयमा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजनाबारे बोलाइएको बैठकमा उहाँले जनताले महसुस गर्नेगरी शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा चाडपर्व मनाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले चाडपर्वमा खासगरी चोरी, लुटपाट, कालोबजारीजस्ता घटना अत्यधिक हुने भएकाले सोही अनुरूपको सुरक्षा रणनीति बनाउन सुझाव दिनुभयो..
सोमबार राष्ट्र बैंकले १० अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ, ५ असोज नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार रु १० अर्ब ३३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचनामार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको जनाएको हो । बैंकका अनुसार ९१ दिने अवधिका लागि रु चार अर्ब तीन करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरिनेछ । उक्त बिल आगामी पुस ८ गते परिपक्व हुनेछ..
महिला पत्रकारको गुनासो : कार्यक्षेत्रमै विभेद्
चिप्लेढुङ्गा, ५ असोज महिलामैत्री सामाजिक संरचना र सञ्चार गृह नहुँदा पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलाको गुणात्मक विकास हुन नसकेको पोखराका महिला पत्रकारको गुनासो छ । क्रियाशिल पत्रकार महिला समूह (डब्लुडब्जुजे)ले आज गरेको ‘फोकस ग्रुप डिस्कशन’ कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार महिलाले व्यासायिक रुपमा अघि बढ्न महिला पत्रकारले विविधखालका चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भनाइ राखेका थिए । महिलाको क्षमता दक्षतामाथि हर हमेसा प्रश्न उठाइने र कार्यक्षेत्रमा जाँदासमेत चारित्रिक..
Results 9825: You are at page 90 of 328